Manchester United Iyo Arsenal Oo Ku Dagaalamaya Xiddiga Bayern Munich Corentin Tolisso
HomeWararka CiyaarahaManchester United iyo Arsenal oo ku dagaalamaya xiddiga Bayern Munich Corentin Tolisso
August 11, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United iyo Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u yihiin inay ku dagaalamaan saxiixa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Bayern Munich Corentin Tolisso .
27 jirkaan ayaa waxaa u harsan wax ka yar 12 bilood heshiiska uu kula jiro kooxda heysata horyaalka Bundesliga waxaana loo malaynayaa inuu u sheegay Nagelsmann in fursadaha uu heysto xilli ciyaareedkan ay yar yihiin.
Sidaas darteed, Tolisso ayaa la filayaa inuu dhammaystiro ka tagista Allianz Arena xagaagan, jariiradda Jarmalka ee Bild ayaa sheegtay in Arsenal iyo Man United loo sheegay helitaankiisa.
Man United ayaa laga yaabaa inay suuqa u gasho inay ku kordhiso qolkooda mashiinka haddii Paul Pogba uu ugu dambeyn ka tago xagaagan, in kasta oo Paris Saint-Germain ay dhowaan la wareegtay Lionel Messi.
Dhanka kale Arsenal ayaa xoojisay khadkeeda dhexe iyadoo lagu daray Albert Sambi Lokonga , laakiin Thomas Partey ayaa qarka u saaran inuu seego inta ka dhiman bisha August dhaawac canqowga ah.
Tolisso, oo lagu soo waramayo in lagu heli karo wax ka yar £ 8.5m xagaagan, ayaa sameeyay seddex gool 24 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2020-21.